Burmese People: July 2008
ရေနံမြေ အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင် အာဠာဝက သခင်ဖိုးလှကြီး
ရေနံမြေ အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်း အာဠာဝက သခင်ဖိုးလှကြီးအား မကွေးမြို့ ခရိုင် ၊ သရက်လေးပင် ကျေးရွာ တွင် ဆင်းရဲသော မိဘ များမှ မွေးဖွားခဲ့ သည် ။ သခင်ဖိုးလှကြီး ၏ မိဘ အမည် များနှင် မွေးသင်္ကရာဇ် ကို အတိအကျ မသိရ သေးပါ ။ ဖိုးလှ ကြီး အသက် ၁၄ နှစ် အရွယ်မှ မျိုးချစ်စိတ်တို့ကိန်းအောင်းစေခဲ့ သော ဖြစ်ရပ်မှာ ထိုကာလက အုပ်ချုပ် နေသော အစိုးရသည် မြေခွန် ၊ လူခွန်များ မပေးဆောင်နိုင်ပါက ပစ္စည်း သိမ်း ၊ သိမ်းစရာပစ္စည်းမရှိ ပါက လူကိုထောင်ချသည် ။ ဖိုးလှကြီး ဖခင်မှာ ဆင်းရဲလွန်းသဖြင့်အခွန်မပေးနိုင် သဖြင့်ဖိုးလှကြီးရှေ့မှာပင် မတရား အဖမ်းခံရလေ သည် ။ မကျန်းမာသော မိခင် ဖြစ်သူမှာ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူအတွက် ပုလိပ်အား မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် တောင်းပန်ရာ တွင်မရသဖြင့် သားဖြစ်သူ ဖိုးလှကြီးအား “ မြေခွန်မဆောင်နီုင် လို့မင်းအဖေ ကိုဖမ်းသွားတယ် သားရယ်…” ဟုဆိုကာ မျက်ရည် ကျလေ သည် ။ ထိုမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသော အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ဖိုးလှကြီးသည် မတရား အနိုင်ကျင့်ခံရသည် ၊ လူမဆန်သော အပြုအမူများ ဟုသတ်မှတ်ကာ ဇာတိမာန် ၊ ဇာတိသွေး တို့ကိန်းအောင်းခဲ့ လေတော့သည် ။
ထို့ နောက် တွင် သခင်ဖိုးလှကြီးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ အဘိုး ဗိုလ်လရောင် ၏ ညာလက်ရုံးတပည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ ဆရာတော်ကြီး တပါးထံ တွင် ပညာသင် ခဲ့ လေသည် ။ ထိုဆရာတော်ကြီးမှာ ဗိုလ်လရောင် ကျဆုံးပြီးနောက် အခြေနေမကျသဖြင့်ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့ ရ ပုံ ၊ နယ်ချဲ့ အစိုးရ ၏ ယုတ်မာ ညစ်ပတ်ပုံ ၊ မြန်မာ တို့ဇာတိသွေးရှိပုံ ၊ နယ်ချဲ့ အစိုးရ အား နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး သုံး ကာ မြန်မာ့မြေပေါ် မှမောင်းထုတ်ပစ်ရန် ကြိုးစား ရမည် တို့ကို အချိန်ရ တိုင်း သွန်သင် လေ ရာ ဖိုးလှကြီးမှာ ဇာတိမာန် တက်ကြွသည် ထက် ၊ တက်ကြွလာလေတော့သည် ။
၁၉၁၅- ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်လာသော အခါတွင် အင်္ဂလိပ်တို့သည် စစ်ပွဲ အတွက် စစ်သား စုဆောင်းလေတော့သည် ။ ထိုအခါ အင်္ဂလိပ် ကိုတော်လှန်တိုက် ခိုက်ခဲ့ သော ဆရာတော်မှ ဖိုးလှကြီးအား အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်သို့ဝင်ရောက် ရန်တိုက်တွန်း လေရာ ဖိုလှကြီးမှာ နားမလည် နိုင်သည့်အတွက်မေးမြန်း ရာတွင် ဆရာတော် ပြန်လည် ဖြေကြားပုံ မှာ ကျွန်အဖြစ်နှင့် နေကြရမည့်အစား အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်အတွင်း အမှု့ထမ်းရင်း အမြတ်ထုပ်သင့်ကြောင်း ၊ စစ်ပညာတို့ကို ရနိုင်သမျှ သင်ကြား သင့်သည့်အကြောင်း ၊ စစ်ပညာတတ်ထားပါမှ တနေ့တွင် ပြန်လည် တိုက်ထုပ်နိုင်မည် တို့ကို ပြောပြလေ သည် ။
ထိုနောက် ဖိုးလှကြီးသည် စစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မက်ဆိုပိုတေးမီးယား စစ်မြေပြင်သို့ရောက် ရှိပြီး စစ်ပွဲပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်ခဲ့ လေတော့သည် ။ စစ် မှူ့ ထမ်းနေစဉ် လူမျိုးခြား အထက်အရာ ၇ှိများနှင့်မျက်နှာကြောတဲ့သူတော့မဟုတ်ပေ ။ တခါတွင် တပ်ကြပ်ကြီး တဦး နှင့် သာမန်ကပ္ပလီ စစ်သား တဦးတို့လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ကြလေရာ တပ်ကြပ် ဖြစ် သူ မှ ယုတ်မာ ညစ်ပတ် ၍ ထိုးသဖြင့်စစ်သား ငယ်မှာ မချိမဆန့်အလူးအလဲ ခံရလေ သည် ။ ထိုသည်ကြိုမင်တွေ့သော ဖိုးလှ ကြီးမှာ အထက်အရာ ရှိ တပ်ကြပ်ကြီး ဖြစ်သူကို စိန်ခေါ် ၍ လက်ဝှေ့ စည်းဝိုင်းတွင်းသို့ဝင်လေတော့သည် ။ အနား ရှိ သူများအားလုံး မှာအံအား သင့် ပြီး ပထမတွင်ကြောင် ကြည့်နေကြသည် ။ နောက် မှ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး ၍ မြန်မာစစ်သား ငယ် ဖိုးလှ ကြီး ကို အားပေးကြလေတော့သည် ။ ထိုအချိန် တွင် ဖိုးလှကြီးမှာ အသက် နှစ်ဆယ်ကျော် သာ ရှိသေးသော်လည်း ခန္ဓာ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် မှာ ကြံခိုင်သန်စွမ်း ထွားကြိုင်းလှသည် ။ မျက်နှာပြားပြား ၊ မေးရိုးကားကား ၊ ပိရိသေသပ်သော နှတ်ခမ်း တို့ဖြင့်ဖိုးလှကြီးမှာ လက်ဝှေ့ ကြိုးဝိုင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာလေတော့သည် ။ တပ်ကြပ်ဖြစ်သူမှာလည်း အများရှေ့တွင် သာမာန် စစ်သား ကလေးတဦး မှ စိမ်ခေါ်ခံလိုက်ရသည် အတွက် ဒေါသ ဖြင့်စည်းဝိုင်းတွင် ၀င်ရောက်လာလေတော့သည် ။
( ဒုတိယ ပိုင်း မျှော် ပါရန် ..........)
Labels: jမန်မာ့ သမိုင်း မှ အာဇာနည် များ
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:160comments
ပုဂ္ဂိုလ်ထုးဆရာတော် ရှင်ဥတ္တမ သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ စစ်တွေ မြို့၊ ရူပ ရပ် အဖ ဦးမြ ၊ အမိ ဒေါ် အောင်ကျော်သူတို့မှ ၁၈၇၉ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၊ ၂၇ ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် ဖွားမြင် ခဲ့သည် ။ မွေးချင် သုံးဦး ဖြစ်သော -
၃ ။ မအိမ်စိုး …….တို့ အနက် အကြီးဆုံး ပေါ်ထွန်းအောင် မှာနောင် အခါ ဦးဥတ္တမ ဖြင်လာသည် ။ ညီအကိုနှစ်ဦး မှာ ၉ နှစ် အရွယ်နှင့်၆ နှစ် အရွယ်သို့ ရောက် ကြသော အခါ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားလို ၍ မိဘ များအား ပူစာရာမရသဖြင့်အိမ်မှထွက်ပြေး ခဲ့သည် ။ ၁၅ ရက်ခန့်အကြာတွင် မှ သစ်ပင်တပင်အောက် တွင် ညီကို နှစ်ဦးအား မိဘ များမှ ပြန်တွေ့ ခဲ့ ကြသည် ။
ထိုနောက်မိဘ များမှ ကလေး နှစ်ယောက် ၏ ဆန္ဒအား ပြည့် ဝ စေရန်အတွက် စစ်တွေ မြို့ရှိ အင်္ဂလိပ် ၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာ သင်သောကျောင်းသို့အပ်နှံ ခဲ့ ရ သည် ။ ကျောင်းအပ်နှံ ရာတွင် အကြီး ဖြစ်သူပေါ်ထွန်းအောင် မှာ သူငယ်တန်း မှ စတက် ရသည် ကိုမကြေနပ်ပဲ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးအား သုံးတန်း မှ စတက် ခွင့်ပြု ပါရန် ရဲ ၀ံ စွာဖြင့်ပြောလေ ရာ ဆရာကြီး မှ သုံးတန်း တွင်သင်ကြားသော အင်္ဂလိပ် စာတို့ကို ဖတ် ခိုင်းရာ တွင် အထစ်အငေါ့မရှိဖတ် ပြနိုင်ခဲ့ သဖြင့်ဆရာကြီး မှ နှစိတန်း မှ စတက် ခွင့်ပြု ခဲ့ ရ သည် ။ ( ကျောင်းမနေ ရသေး ပဲဖတ် ပြနိုင် ခြင်း မှာ အင်္ဂလိပ်ကျောင်း တက် သော သူငယ် ချင်း များထံ မှ ကြို တင် သင် ကြားထားခြင်း ဖြစ်သည် ဟုနောင် အခါ မှမိဘ များသိခဲ့ ရ သည် ။ )
ကျောင်းတက်၍ ၂ နှစ်အကြာ ၅ တန်းသို့ အရောက် တွင် အတန်းတင် စာ မေး ပွဲ တွင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ရခိုင်တိုင်း မင်းကြီးကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့် သောဒုတိယ ဆုရသည် ကို ဆုယူပြီးပြီးခြင်းမှာ ပင် ညီငယ် အား စစ်တွေကမ်းနားသို့ ခေါ်သွားပြီး ဆိပ်ကမ်းအရောက်တွင် “ ‘ ဒီမှာငါ့ ညီ ဆုယူရင် ပထမ ဆုက လွဲ ရင် ဒုတိယ ၊ တတိယ ဆို ဘယ်တော့ မှ မယူဘူး “ ဟုဆိုကာ ရရှိခဲ့ သောဆုအား ချိုးဖဲ့ ဆုတ်ဖြဲ ပစ်ခဲ့ လေ သည် ။
ထိုနှစ် မှာပင် ၎င်း တို့ညီအကိုနှစ် ဦးအား မိဘများ ထံ မှ ခရစ်ယန် ဘုန်းတော်ကြီး တပါး မှာ မွေးစားခွင့် တောင်း ပြီး ကလကတ္တား တွင် ကျောင်း ထားမည့် ကြောင်း ပြောဆိုလာရာတွင် မိဘ များမှ ခွင် မပြု ခဲ့ သဖြင့်နိုင်ငံခြားတွင် ပညာသင်ကြားရ မည့် အခွင့် ရေးတို့ ဆုံးရှုံး ခဲ့ရ သည် ။ ၁၃ နှစ်သားအရွယ်တွင် ပေါ်ထွန်းအောင် မှာ နိုင်ငံ ခြားတွင် ပညာ သင် ယူလို စိတ် ပြင်းပြလာပြီးငွေ ရှိလျှင် ဖြစ် နိုင်သည် ဟု ယူဆကာ ဦးလေးတော်သူ ထံ ကူညီ လုပ်ကိုင်ရင်းငွေ စုခဲ့ သည် ။ သို့ သော် ဆန္ဒ ရှိသည့် အတိုင်း ဖြစ်မလာသောအခါတွင် မိဘ များထံ သို့ မပြန်တော့ပဲ စစ်တွေ မြို့ ရှိရွှေစေတီကျောင်း ဆရာတော် ထံ သို့သွားရောက် ကာ ပရိယတ္တိ စာပေ တို့သင်ကြားပေးပါရန် လျှောက် ထားရာ ရဲရင့် တက်ကြွသော စိတ်ဓါတ် ကိုသဘောကြ သဖြင့်ဆရာတော်မှ ဖိုးသူတော် အဖြစ် ၀တ်ခွင့်ပြု လိုက် သည် ။
ဖိုးသူတော် အဖြစ် နှင့်၂ နှစ် ခန့်ပရိယတ္တိ စာပေတို့ သင်ကြားပြီးသောခါ အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် တွင် ညီ ငယ် ကိုပါခေါ်ဆောင် ပြီး သာမနေ ၀တ်ခဲ့ ကြသည် ။ ပေါ်ထွန်းအောင် မှ ရှင်ဥတ္တမ ၊ ကျော် ထွန်းအောင် မှာ ရှင် အရိယ ဖြစ်လာ သည် ။ထို့နောက် ရှင် ဥတ္တမ သည် ပရိယတ္တိ သင် ကြားရာတွင် ထင် ရှားသော ပခုက္ကူ သို့သွားရောက်လိုသော ဆန္ဒ ပြင်းပြလာသဖြင့်လူဝတ်လဲပြန်ကာ ဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာနှုင့် အတူ စစ်တွေ မြို့မှ ထွက် ခွာလာ ရာ တောင် ငူ မြို့သို့ အရောက် တွင် စာပြန်ပွဲ နှင့် ကြုံ ကြိုက် လေ သဖြင့်ဝင်ေ၇ာက် ဖြေ ဆိုရာပထမ အဆင့်ရရှိခဲ့ လေ သည် ။
ပထမ ဆုရ သည် အတွက် လူသိ များလာပြီး တောင်ငူမြို့ ၊ ကျွန်းကုန်း ရပ် ရှိ ရှမ်းအမျိုး သမီးတဦး မှ ဆရာတော် ဦးဂန္ဓမာ အား ပေါ်ထွန်းအောင် ကိုမွေးစား ခွင့် ပြုပါရန် လျှောက်ထားရာ ဆရာတော် မှ ပေါ်ထွန်းအောင်၏ သဘောကို မေးမြန်းလေ သည် ။ ထိုအခါမိမိ အား မွေးစာ လိုပါက ကာလကတ္တား သို့ပညာ သင် စေလွတ် ရမည် ဟု ဆို ရာ ရှမ်းအမျိုး သမီး မှ လဲ သဘောတူသဖြင့်ခေါ်ယူမွေးစား ပြီး ၁၇ နှစ် အရွယ်တွင် နိုင်ငံ ခြားသို့ပညာသင် သွားရ လေတော့ သည် ။
၁၉ - နှစ်သား အရွယ်တွင် ကာလကတ္တား မှ ၁၀ တန်းအောင် မြင် ပြီး မြန်မာပြည် သို့ပြန်လာကာ သာမဏေ ပြန်ဝတ်သည် ။ ထို့ နောက် ပခုက္ကူ သို့ကြွရောက် ပြီးပရိယတ္တိ စာပေ တို့ ကို သင် ကြားပြန်သည် ။ အသက် ၂၀ အရွယ်တွင် စစ်တွေ မြို့ဘုံဘေဘားမား ကိုယ်စား လှယ် ဖြစ် သူ ဦးထွန်းအောင်ကျော် မှ ဒကာခံယူပြီး ရဟန်းဘောင် သို့ တက်ရောက်ခဲ့ သည် ။
ရဟန်း ဖြစ်ပြီး အခါတွင် အန္ဒိယသို့ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်လည် ကြွ ချီ ပြီး ဒေသန္တရ ဗဟုသု တနှင့်သက္ကတ ၊ ဘင်္ဂလီ ၊ နာဂလီ စသော ရှေးဟောင်း စာပေ များ ကို့အထူးလိုက် စား ပြန် သည် ။ အန္ဒိယ ပြည် ၌ ရှိ စဉ် အမျိုးသား ကောလိပ်ကြီး တခုတွင် ပါဠိ နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ ပညာရပ် များကို ပို့ချ ပေးရသော “ ပါဠိ ပရော်ဖက်ဆာ “အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့ ပြန်သည် ။ ထိုကာလ အတွင်းအန္ဒိယ ပြည်သူတို့၏ ကြည် ညို ခြင်း ကို အထူးခံ ခဲ့ ရပြီး အိန္ဒိယ ရှိ အကျော် အမော် များနှင့်ယှဉ် ပြိုင် ပြီး ဟိန္ဒူမဟာ ဆမ္မ အသင်းကြီးတွင် ဥက္ကဌ ရာထူး ရခဲ့သည် ။ အန္ဒိယ တွင် (၈) နှစ်ကြာ ပြီးနောက် ပြင်သစ် သို့ ပညာသင်ကြားရန် ထွက် ခွာသွားပြန်သည် ။ ပညာသင်ကြားနေ စဉ် ( ၁၉၀၅ -ခုနစ် ) ၀န်းကျင်၌ ရုရုား နှင့်ဂျပန် စစ်ဖြစ် ပွားရာတွင် နိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံ မှ အနိုင် ရရှိခဲ့ သဖြင့် သွားရောက် လိုသောဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သ ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ပြန်လည် ကြွရောက် ခါ ၁၉၀၇ -ခုနစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၄ ) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှ စင်္ကာပူ သို့ကြွ လေတော့သည် ။ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် စင်္ကာပူ မှတဆင့်ဂျပန်သို့ကြွရောက်လေ ရာ မတ်လ ၇- ရက်နေ့ တွင် ဂျပန်ပြည် ယိုကိုဟား ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ လေ သည် ။ ဂျပန်ပြည် ၌ ၅- နှစ်ကြာမျှ ပရ်ာဖက်ဆာ အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ စဉ် တရုတ်ပြည် မှ တိမ်းရှောင်လာသော ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်နှင့်သိကျွမ်းခဲ့ သလို တရုတ်ပြည်အတွက်လဲ အကြံ ညဏ် တို့ပေးနိုင် ခဲ့ သည် ။
ထိုမှတဖန် မြန်မာပြည် သို့ပြန်လည်ကြွချီ ရာတွင် အင်ဒိုချိုင်းနား ရှိ ဆေ ဂုံ ( ဟိုချီမင်း ) မြို့ သိုအရောက်တွင် မင်ကွန်းမင်းသားကြီး၏ ဖိတ်ကြား ချက် အရ ဆွမ်းစာကြွရောက် ပြီး မြန်မာ ပြည် အရေးဆွေးနွေး ခဲ့ ရာတွင် ဆရာတော် မှ အရေးမလှကြောင်းပြော ပြ သဖြင့်မင်းသားကြီးခမျာ မျိုးချစ်စိတ် ကြောင့် မျက်ရည် ကျ ခဲ့ ရှာ သည် ။
၁၉၁၀ -ခုနှစ်လောက်တွင် မြန်မာပြည် သို့ ပြန်လည် ရောက် ရှိလာသော အခါတွင် ဘာသာစကားပေါင်း ( ၉ ) မျိုး ခန် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာတော် အား ၀ိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းသားများနှင့် အတူ ပြည်သူများက လေးစာကြည်ညိုကြသည် ။့ ထိုအခါတွင် ဆရာတော် မှာ ပြည်တွင်းသို့လှည့် လှည် ကာ နိုင်ငံရေးတရားတ်ို့စတင် ဟောပြောစ ပြုလာသည် ။ ၁၉၁၂- နှစ် တွင် နှမ ဖြစ်သူ ဒေါ် အိမ်စိုး နှင့် အတူ မြန်မာလူငယ် ( ၃၁ ) ယောက် အား ဂျပန် နိုင်ငံ ပညာသင်ကြားစေရန် အတွက် ထွက်ခွာလာခဲ့ပြန် သည် ။ ၁၉၁၉ -ခုနှစ်တွင် ဂျပန်မှ ပြန်ကြွလာ ပြီး သူရိယ သတင်းစာတိုက် တွင်သီတင်းသုံးကာ သတင်းစာ မှနေ၍ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါများ ရေးသား ခဲ့ သည် ။ ( ဒုတိယ ပိုင်း ကို ဆက် လက် အားပေး ပါ ရန် ….)
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 08:510comments
အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်တည်း ဖြင့်တိုက်ပိတ် ခံထားရသော ဦးဝိစာရ သည် ၁၂၈၉ ခု ကဆုန် လဆန်း ၈ ရက် ( ၈-၅-၁၉၂၇ ) တနင်္ဂနွေနေ့ မှ စတင်၍ ဒုတိယ အကြိမ် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ ပြန်သည် ။ ၃ -ရက်မြောက်နေ့ တွင် ထောင်ပိုင်ကြီး ကိုယ်တိုင်လာပြီး အစာစားရန် အ၀တ်ဝတ်ရန် ကြိမ်းမောင်း ပြောဆို သည် ကို ဆရာတော် မှနေ၍ သင်္ကန်း မ၀တ်ရသ၍ အစာမစား ၊ အ၀တ်မ၀တ် ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ သည် ။ ရက်အတန်ကြာ သောအခါ သင်္ကန်း ပြန်မ၀တ်စေသေးပဲ ၊ အတင်းအဓမ္မ ချုပ်နှောင်၍ နွားနို့၊ ကြက်ဥ တို့ကို နှာခေါင်း မှ အတင်းသွင်းကြ သည် ။ မသေတသေ ဖြစ်အောင် တနေ့နှစ်ကြိမ် သွင်းကြ သည် ဟု ဆို၏ ။.ထို့နောက်တဖန် စအိုပေါက် မှနေ၍လည်း ပိုက်သွင်းကာ ၀မ်းချူ ကြပြန်သည် ။
ဆရာတော်မှာ အစာမစားပဲ နေလာရင်း ရက်ပေါင်းလေးဆယ် ကျော်လာသောအခါ ဂုန်နီ ဖျင် ခင်း အိပ်.ယာပေါ်တွင် သတိမေ့တချက်လျှော့တချက်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်း လဲသော အခါတွင်မှ ထောင်ဆရာဝန်များရောက်လာကာ ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ ဆောင်ခဲ့ ကြသည် ။ ဆေးဝါးကုသပြီး အတန်ငယ်သက်သာ လာသော အခါ (၁၂၈၉-ခု နတော်လဆန်း ၇ -ရက် ) နေ့ တွင် တံတားလေး အရူးထောင်သို့ပို့ ဆောင် ခဲ့ကြပြန်သည် ။ ဆေးရုံသို့ ရောက်သော အခါ (၇ ) ခန့် ကြိုးများဖြင့်တုတ်နှောင်ပြီး ရိုက်နှက်ခြင်း ၊ နား ၊ နှာခေါင်း များထဲသို့ ရေများ လောင်းထဲ့ ပြီး နှိပ်စက်ကြပြန်သည် ။ ပြီးနောက်တွင် ဆရာတော် အား ရူးသွပ်နေသော သူများနှင့်အတူထားပြန်သဖြင့်ရိုက်နှက်ကန်ကျောက် ခြင်း ဆဲဆိုခြင်း များအပြင် ဆရာတော် ၏ ဖွားဖက်တော် ကိုပါ ဆွဲ ညှစ်ကြသည် အထိ ဒုက္ခ အမျိုးမျိုး ပေးခဲ့ ကြသည် ။
ထိုသို့ ဒုက္ခ အဖုံဖုံပေးပြီးမှ ဆရာတော် ကို ထောင်ထဲ သို့ပြန် ပို့လိုက် ကြသည် ။ ၁၂၈၉ -ခု နတော်လပြည့် တွင် ဆရာတော် ကို မထင် မှတ်ပဲ အာဏာပိုင်များမှ သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပြန်ပေးလိုက် သည် ။ ဆရာတော် လည်းသ့င်္ကန်းပြန်လည် ၀တ် ခွင့် ရသဖြင့်အစားအသောက်များ တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်စားသောက်ရာမှာ အားအင်များ ပြန်လည် ပြည့် ဖြိုးစ ပြုလာသည် ။ မကြာခင်မှာပဲ တပို့ တွဲလဆုတ် ( ၁၀ ) ရက်နေ့တွင် တဖန်သင်္ကန်း ကိုအတင်ချွတ်ပြန်လေသည် ။ ဆရာတော် လဲ တတိယ အကြိမ် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒ ပြ ပြန်လေသည် ။
` အာဏာပိုင်များမှ ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲ ပြင်းထန်မှု့ ကြောင့်၁၂၈၉-ခု တပေါင်းလဆန်း ( ၆ )ရက်နေ့ နံနက် ပိုင်းတွင် သင်္ကန်းအားပြန်လည် ပေး အပ်ပြီး နေ့ လည် တစ်နာရီ အချိန်တွင် ကာလကတ္တားသို့ထွက်မည့် သင်္ဘောဖြင့်အန္ဒိယ နိုင်ငံ မေဒနီထောင် သို့ ပို့ လိုက်လေတော့သည် ။ ထိုမှအဆင့် ဆင့်လာလဗဂျားရား ရဲဌာန ၊ အလီပူရ ရဲဌာန ၊ ဘလိဂန်ဂျ ရဲဌာနများသို့ပိုဆောင်ခဲ့ ကြသည် ။
ဆရာတော်အား ကလက္ကတား ရဲဌာန များမှတဆင့်(၁၈-၂-၁၉၂၉ ) နေ့တွင် ရန်ကုန်ထောင်ကြီးသို့ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည် ။ ( ၂၈ -၂ -၁၉၂၉ )နေတွင့် ဆရာတော်အားထောင်မှ ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ လေ သည် ။ ဆရာတော်သည် ထောင်မှလွတ်ပြီး အမြို့ မြို့အနယ်နယ် သို့လှည့် လည် ကာ ၀ံသာနု တရားများဟောပြန်လေ သဖြင့်( ၆- ၄ -၁၉၂၉ ) နေ့ တွင် ကာလက္ကတားသို့သင်္ဘောဖြင့် ကြွရန်ပြင်ဆင်နေခိုက် သုံးခွ နယ် ၊ ဖရုံကန် ရွာတရားပွဲတွင် အစိုးရအား အကြည် ညိုပျက်စေရန် ဟောပြောခဲ့မှု့ကြောင့်ပုဒ်မ ၁၂၄ ( က ) အရအဖမ်းခံရပြန်လေသည် ။ ထောင်တွင်းရောက်ပြန်လေသောအခါ ရဟန်းတော်တို့ ရသင့် ရထိုက်သော အခွင့် အရေးများ တောင်းဆို ရာ မရပြန်သဖြင့်အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ ပြန်လေသည် ။
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေသော ဆရာတော် အား ဆန္ဒပြ ၍ (၈၃) ရက်မြောက်နေ့( ၂၈ - ၈ -၁၉၂၉ ) နေ့ တွင် ဟံသာဝတီ စက်ရှင်တရားသူကြီးသည် အားအင်ပြတ်လပ်ကာ ဗုန်းဗုန်း လဲနေသော ဆရာတော် ဘေးနား တွင် ပုဒ်မ ၁၂၄ ( က ) အရ ပြစ်မှု့ ထင်ရှားသည် ဟုဆို ပြီး ထောင်ဒါဏ် တသက်တကျွန်းနှင့်၆ နှစ် ကျခံစေရန် စီရင်ချက် ချခဲ့သည် ။ စီရင်ချက် ချပြီးသည် နှင့် တပြိုင်နက် သင်္ကန်းများကို ချွတ်ယူသွားပြီး ထောင်သို့ပို့ ဆောင်ခဲ့ လေသည် ။ ဆရာတော်မှာ လဲ ဆက်လက်၍ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ နေရာ ရက်ပေါင်း ( ၁၄၀ ) အရောက်တွင် တွံတေးဆရာတော် ဦးကေတု နှင့်အာလံဆရာတော် ဦးလာဘ တို့ က အာဏာပိုင် များထံမှ ခွင့် တောင်း၍ ဆရာတော် ဦးဝိစာရ ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့ရာ ကြိုးတိုက် နံပါတ် - ၅ ခုတင်တလုံး ပေါ်တွင် အ၀တ်အစားကင်းမဲ့ နေပြီး ပိန်လှီပြားချပ်ကာ အသက်ငွေ့ ငွေ့ သာ ရှိတော့ သော ဆရာတော် အား ဖူးမြင် ရလေသောအခါ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ကြလေ သည် ။
ဆရာတော် နှစ်ပါးသည် နား နားသို့ တိုးကပ် ပြီး “ တပည့် တော် တို့ လာရောက်ဖူးမျှော်ပါသည် ဘုရား “ ဟုဆိုရာတွင် ပထမအကြိမ် တွင် မကြား ပဲ ဒုတိယ အကြိမ် ခပ်ကျယ်ကျယ်လျှောက်ထားသော အခါတွင်မှ ချိုင့် ခွက်နေသော မျက်လုံးများကို အားယူဖွင့်လှစ်ရင်း လေသံမျှသာအသံဖြင့်“ လ်ိမ်…မာ…ရစ်…ကြ..ပါ…..” ဟု ဆရာတော် ဦးဝိစာရ၏ နောက်ဆုံးစကား ကို မိန့် ကြား တော် မူခဲ့ လေသည် ။
ဆရာတော် ဦးဝိစာရ သည် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေရာ ရက်ပေါင်း ၁၆၆ ရက်အကြာ..-သက္ကရာဇ် ၁၂၉၁ ခု ၊ တော် သလင်း လဆုတ် ၂ ရက်နေ့( ၁၉ - ၉- ၁၉၂၉ ) ည ( ၈ ) နာရီ မိနစ် ၂၀ အချိန်တွင် ရန်ကုန်ထောင်ကြီးအတွင်း သက်တော် လေးဆယ့် တနှစ် အရွယ်တွင် ခန္ဒာချုပ်ငြိမ်း၍ ဘ၀ နတ်ထံ ပျံလွန်တော် မူလေ သည် ။
မှတ်ချက် ။ ။ ယခင် က တော်သလင်းလပြည့် ကျော် ( ၂ ) ရက်နေ့အား ဦးဝိစာရ နေ့ဟု သတ်မှတ် ဂုဏ်ပြု ခဲ့ ကြပါသည် ။ ဦးဝိစာရ ၏ မြန်မာပြန် အဓိပါယ် မှာ ( ၀ိ = အထူး ၊ စာရ = အကျင့်) အကျင့်ထူးရှိသူ ဟု အဓိပါယ်ရပါသည် ။
ကျမ်းကိုး ။ ။ - မြန်မာ့ စွယ်စုံ ကျမ်း အတွဲ - ၁၂
- အာဇာနည် အရှင် ဦးဝိစာရ - ( သခင် လွင် ) -၁၉၇၁
- တချိန်က ထင်ရှားခဲ့ သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ (ရွှေ ဥသြ ) - ၁၉၈၆
· စာရေးသူ အမှာ ။ ။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ရဲရဲတောက် တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ သော ရဟန်း ၊ ပြည်သူ ၊ ကျောင်းသား ၊ အလုပ်သမား ၊ တိုင်းရင်းသား အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ် အပေါင်းတို့ အား သမိုင်း စာမျက်နှာများ မှ ပျောက်ကွယ်မသွားစေ ရန် ရည်ရွယ်၍ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစား ဖော်ထုထ် သွားပါမည် ။ ။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:200comments
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 07:440comments
ပြည်တွင်း မှ နေရ်ျ ဘလော့များနှင့်အခြား ပိတ်ထားခြင်း ခံရသော ၀က်ဆိုဒ် များကို အလွယ် တကူ ကျော်ပြီး ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့ နိုင် ရန်အတွက ဆော့ ဝဲ တမျိုး ပေးလိုက် ပါ တယ် …။ အသုံးပြုရာတွင် အလွန်လွယ်ကူပါ တယ် …။ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြသော အာထရာဆဖ် ဆော့ဝဲ နှင့်အသုံး ပြုရ ပုံ ခြင်း အတူတူ ပင် ဖြစ် ပါ သည် …။
အိုင်အီးနှင့်ချိတ်ပြီး တိုက် ရိုက် အလိုအလျှောက် အလုပ်လုပ်ပါတယ် ..။ မော် ဇီလာနှင့်သုံးချင် ရင်တော့ အင်တာနက် (Tool) ထဲ ကို ၀င် ပြီး ……
Address..( 127.0.0.1 ) နှင့်port ကို (8580 ) ချိန်းပေး လိုက် ပါ က အသင့်သုံးနိုင် ပါ ပြီ …..။ ဆော့ ဝဲ အမည် လေးကတော့freegate ပါတဲ့ ဗျား……။ ငြိမ်းချမ်းရေး သင်္ကေတ ခိုဖြူ ပုံလေးနဲ့ပါ …။
Google ကနေလဲ အလွယ်တကူရှာနိုင်ပြီး..၊ အခမဲ့download လုပ် နိုင် ပါ တယ် …။
ခုယူချင်ရင်တော့ဟောဒီမှာ လင့် ခ် http://asia.cnet.com/downloads/pc/swinfo/0,39000587,50001191r-39393865s,00.htm
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 08:540comments
- ဧရာဝတီ ရင်ပြင် ကို နာရီပိုင်းသာ လာခဲ့ ပေမယ့်
တသက်မမေ့ ဘူး …( ဘာကြောင့် လဲ )
ငါတို့ ရဲ့ မြေ ၊ ငါတို့ ရဲ့ လေ ဟာ
ခေတ်အဆက်ဆက် မှာ သာယာခဲ့ တယ်….။
- ငါတို့ ဘိုးဘွားတွေ ပြောဘူးတယ်….
တို့ရေ ၊ တို့မြေ ကို
မင်းဆိုး မင်းညစ် တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ အခါ
သဘာဝတရားက ဖောက် ပြန်တယ်…တဲ့။
- တို့ ပြည်တွေ သူတွေ ဟာ ဟို ယခင် ထဲက
အာဏာရှင်စနစ် အောက် မှာ
ထမင်းတလုပ် တုတ်တချက် နဲ့
အသက်ဆက်နေရ တဲ့ ဘ၀တွေ ပါ
- နင် လျှောက်ခဲ့ တဲ့လမ်းကို နောက်ပြန်ကြည့် စမ်း
သားပျောက်ရှာ မိခင်တွေ ၊ မိဘ မဲ့ လူမမယ် ကလေးတွေ
တစ်ည နဲ့ တစ်ရက် မှာ အသက်ကင်းမဲ့ သွားသူတွေ
ဒီအဖြစ်အပျက် ရဲ့ တရားခံဟာ နင်ပဲ…..။
- အာဏာစက် နဲ့ ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွပ် ပြီး
သခိုး က လူပြန်ဟစ် ၊ ကျန်ရစ်တဲ့ သူတွေကို
အငတ်ဘေး လက်နက် နဲ့ထပ်သတ်နေသော လူတစုဟာ
အနှစ် မပါ အကာ ပါးပါး ၊ ခွေးစာသာသာကျွေးနေတယ်…..။
- လူသတ်ကောင် နာဂစ် ၊ နာမည်ဆိုးဖြစ်သွားတဲ့ နင့် ကို
တို့ တတွေ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ၊ သမိုင်းကျန်ရစ်အေင်
နောက်တခါ နင် လာတဲ့အခါ ၊ ကြပ်ပြေးရွာ နေပြည်တော် မှာ
ငါစောင့် နေမယ်………….။ ။
Posted by ရန်ကုန်ပြည်သူများ at 23:550comments